दाह्री बाट पनि मान्छेको चरित्र चित्रण हुने
Homeमजाकदाह्री बाट पनि मान्छेको चरित्र चित्रण हुने
mskhanal 11:55 AM
मानिसको चरित्र जाच्ने अनेकन तरिका छन। उसको पोसाक बाट कपाल बाट जुता बाट समेत उस्को ब्यक्तित्व जाँच्न सकिन्छ। त्यस्तै दार्ही बाट समेत मानिसको चरित्र बुझ्न सकिने रहेछ। आउनुहोस यस्ता केहि दाह्री को बारेमा चर्चा गरौँ।
ओठ माथि जुँगा मात्र राखेर अरु सबै सफाचट पारेका मानिस हरु बिशेषत भलाद्मी मानिन्छन। युबा पुस्ता मा खासै लोकपृय नरहेको यो स्टाइल बिसेसत भलाद्मी मानिसको पहिचान मानिन्छ। त्यसैले यो स्टाइल इमान्दारी हो
ओठमुनी थोरै दाह्री राखेर अरु सबै फाल्ने तरिका बिसेसत युबा पुस्तामा लोकप्रिय तरिका हो। तर यो दाह्री राख्ने युबा राइ समाजका ठुलाठालु ले खासै बिस्वास गरेको पाइदैन। त्यसैले यो स्टाइल हाबादारी मान्न सकिन्छ
कपाल बाट चुच्चो निकालेर अगाडी सम्म ल्याउने अनि गालामा फाल्ने तर ओठ वरिपरि राख्ने तरिका समाजमा लगभग बर्जित जस्तै छ। र यो स्टाइल राख्न संघर्ष र सम्झौता दुबै आबस्यक छ। त्यसैले यो दाह्री लाइ साझेदारी मान्ऩ सकिन्छ।
फ्रेञ्च कट बिसेसत प्रोफेसनल मानिसको सोभा मानिन्छ। त्यसैले यो दाह्री समझदारी मानिन्छ।
र बिना कुनै स्टाइल सबै दार्ही पाल्ने हरु देख्दै चिन्तित देखिन्छन। त्यसैले यो दाह्री दिक्दारी मानिन्छ।
अँ साच्ची तपाईँ कुन बर्गमा पर्नु भो?
krishna g.c. April 22, 2010 at 3:18 PM
ए सर म त दिक्दारी मा पो परे छु।
Aakar April 22, 2010 at 8:04 PM
म त बिना कुनै स्टाइल सबै दार्ही पाल्ने हरु मा परेछु । तर देख्दै चिन्तित देखिन्छु पनि होला । तर यो दाह्री दिक्दारी भने हैन है । हा हा हा !
mskhanal April 24, 2010 at 1:27 PM
hehehehe sathiharu phase jasto chha
Rabi Mishra August 4, 2012 at 2:54 PM